Kilabiin sababa vaayrasii koroonaaf jecha walirraa fageenya eegee taphate goolii 37-0n injifatame – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Kilabiin sababa vaayrasii koroonaaf jecha walirraa fageenya eegee taphate goolii 37-0n injifatame
On Sep 18, 2020 46
Finfinnee, Fulbaana 8, 2012 (FBC) – kilabiin sababa vaayrasii koroonaaf jecha walirraa fageenya eegee taphate goolii 37-0n injifatame
Garee tokko irratti gooliin hanga kana baayyatu yeroo lakkaa’amu qabxii kubbaa kachoof lakkoofsifatan fakkaachuu mala.
Sodaa vaayrasii koroonaaf jecha walirraa fageenya eeggatanii taphachuuf taphattoota hir’isanii galan.
Garee kubbaa miilaa Jarman sababa vaayrasii koroonaaf walirraa fageenya eeggachuuf taphattoota hir’isuun taphate kun kubbaa haalaan waliif kennee taphachuu waan hin dandeenyeef goolii 37-0 injifatame
Gareewwan kubbaa miila biyya Jarman Ripdolf fi SV Holdensted II Dilbata darbe morkii tapha biyya keessaaf wayita waliin taphatan Ripdolf walirraa fageenya eeggachuun taphachuuf jecha taphattoota torba qofa hiriirsuun taphate.
Sababni isaammoo taphattoonni garee SV Holdensted II tapha sana dura garee biraa wajjin taphatanirratti taphattoonnisaanii nama vaayrasii koroonaan qabame wajjin tuttuqqaa uumuun isaanii waan mirkanaa’eef.
Kanarraa ka’uun Ripdolf taphattoota torba qofa hiriirsisee gooliiwwan 37-0n injifatameera.
Dandeettii hoogantoota manneen barnootaa cimsuuf leenjiin…